I-Clam Elite, enye indlela ene-ANC ngoncedo lweFresh´n Rebel | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | ngokubanzi, Reviews
Ukurhoxiswa kwengxolo esebenzayo, eyaziwa ngokuba yi ANC Isifinyezo sayo ngesiNgesi, kuye kwaba libango kubavelisi bemveliso yeaudiyo eya isiba ngumyalelo wosuku, okwenzekileyo ngokukhutshwa okutsha kweFresh'n Rebel, ifemi yokuba ukusuka apha besilandela rhoqo, ke thina andinakuphuthelwa kukuqeshwa.
Sikubonisa iClam Elite entsha evela kuFresh´n Rebel, iseti yentloko ene-ANC kunye nezinye izinto ezininzi ezimangazayo zobuchwephesha. Hlala nathi kwaye ufumane yonke into oyifunayo malunga neefowuni ezintsha ze-Fresh'n Rebel ngaphezulu kweendlebe.
3 Ukurhoxiswa kwengxolo kunye neendlela
4 Uhlelo lokusebenza lwesandi sakho kunye nomgangatho wesandi
Uvukelo olutsha luhlala luyinyani kubume balo, kokubini ngombala nakwizixhobo. Ezi Clam Elite zilandela ukuhambelana kwemibala, zinikezela ngeethoni ezimnyama, ezimhlophe kunye nezuba. Ngendlela efanayo, inothotho lweeplastiki kunye neetreyini ezilinganisa intsimbi. Nangona kunjalo, oku kubonakala ngathi akulonakalisi ulwakhiwo ngokubanzi, oluziva lomelele kwaye lusemgangathweni. Ngaphandle koku, ngenxa yeplastiki kuphuculwe kwinqanaba lokukhanya. Ezi Clam Elite azikho nzima ngokuqhubeka nokusetyenziswa kumava ethu.
Ibandakanya intambo yenyani ye-USB-C
Kubandakanya i-3,5mm Jack port kunye nenayiloni eboshiweyo intambo ye-AUX
Kubandakanya ukuphatha ibhegi
I-headband yenziwe nge-textile kwaye ine-memory memory foam ngaphakathi ukuze kube lula ukuyibeka. Ngokucacileyo sinenkqubo eqhelekileyo yeteleskopu kolu hlobo lwentloko elungiselelwe iintloko zethu. Ngokwenxalenye yayo, ii-headphones ezigubungela ngokupheleleyo indlebe zinesigqubuthelo esenziwe ngesikhumba, sijikeleza ngenkululeko yokuhamba kwaye ziyasongeka.
Kweli candelo Sifumene iphaneli yokuchukumisa kuncedo lokuva, kunye neqhosha lokuvula / lokususa i-ANC, iqhosha le-ON / OFF kunye ne-USB-C port apho siza kuhlawulisa khona isixhobo. Ubunzima bebonke ziigram ezingama-260 kuphela.
Ngokucacileyo, njengee-headphone ezingenazingcingo, sineBluetooth yokunxibelelana nesixhobo, nangona sinokusebenzisa ithuba lesicelo sayo sesandi esiza kuthetha ngaso kamva. Kweli candelo i-Clam Elite ye-Fresh´n Rebel inayo Ukucinywa kwengxolo eDijithali, Ukubonelela ngamava aphezulu. Oku kuncedwa luthotho lweendlela esiza kuphinda sithethe ngazo kamva.
Sinezibuko le-USB-C esinokuthi sibize ngalo ii-headphone kwaye Baneeyure ezingama-40 zokuzimela kumdlalo wokudlala, oya kuncitshiswa ukuya kwiiyure ezingama-30 xa sisenza ukucinywa kwengxolo. Intlawulo epheleleyo yala maClam Elite yi-Fresh'n rebelde iyakusithatha malunga neeyure ezine, ukuze sigqibe ukuba asinalo naluphi na uhlobo lwentlawulo ekhawulezayo. Ngaphandle koku, ukuzimela kuxhaphake kakhulu kangangokuba asikhe siyibone imeko esinokuthi siyifune. Nangona kunjalo, Njengoko sinesibuko seJack se3,5mm, singazisebenzisa ngendlela yesiko xa siphelelwe kukuzimela.
Ukurhoxiswa kwengxolo kunye neendlela
Kule meko Uvukelo olutsha ithathe isigqibo sokuphucula uludwe lweClam ngolu hlobo "lwe-Elite" kwaye ngenxa yoko isinike ukucinywa kwengxolo yedijithali ethembisa ukufikelela kuma-36 dBi. Kwiimvavanyo zethu izibonakalisile zanele, ubuncinci kwimowudi yokurhoxisa ingxolo. Izinto ziyatshintsha xa sitshintshela kwenye indlela.
Ukucinywa kwengxolo esemgangathweni: Iya kucima yonke ingxolo ngomthamo ophakamileyo onikezelwa yiClam Elite ukuya kuthi ga kwi-36 dbi
Indlela yokuma: Le ndlela iya kurhoxisa eyona ngxolo iphazamisayo kwaye iphindaphindeka kodwa iya kusivumela ukuba sibambe iincoko okanye izilumkiso ezivela ngaphandle.
Kwimeko yeNdlela eMbient sibona ukuba inokuthi ichaphazele njani iithoni zomculo esimameleyo. Nangona ime kakuhle, andizithandi kakhulu iindlela 'ezibonisa', ukucinywa kwengxolo okusebenzayo kusebenza kakuhle, kwaye ndicebisa ukuyisebenzisa kwindawo ekhuselekileyo. Nangona kunjalo, Ukujonga indlela ezibaluleke ngayo iindlebe zakho zeendlebe, sineqondo elifanelekileyo lokuzahlula xa singasebenzisi le software.
Uhlelo lokusebenza lwesandi sakho kunye nomgangatho wesandi
Ezi Clam Elite zikhatshwa kukusebenza okungaqhelekanga kukumisela uhlobo lwesandi ngokusebenzisa isicelo esifumaneka simahla kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android. Nje ukuba sihambelane neClam Elite yethu, into elula ngokubamba iqhosha le-ON / OFF, inkqubo yokulinganisa iya kuvula eya kuhlala malunga nemizuzu emithathu kwaye inomdla. Nje ukuba iphepha lemibuzo ligqitywe, iprofayili iya kwabelwa iClam Elite yethu engazukugcinwa kwifowuni kodwa kwiifowuni ngokwazo, esinokuthi sichonge kwaye siguqule nanini na xa sifuna ngaphandle kokulahlekelwa siseto ngelixa sizisebenzisa.
Inkqubo yepaneli yokuchukumisa ukulawula umxholo wemultimedia nevolumu
Ukuchongwa kokubekwa ukuze umise umculo ngokuzenzekelayo
Ngokwenxalenye yayo, umgangatho wesandi wahluka kakhulu ukuba sizilinganisile kwaye ukuba akunjalo. Kwimeko yam ndiye ndabona ubukho obugqithisileyo beebass emva kokulinganiswa ngenxa yoko ndikhethe imowudi esemgangathweni, masithi bafika belinganiswe kakuhle njengomgangatho. Asazi ukuba bane-aptX codec. Basinika intsebenzo elungileyo kwii-bass kunye nase mids, kucacile ukuba bayasokola kunye neendawo eziphakamileyo, ngakumbi ukuba siya kude nomculo wentengiso, njengokuba kunjalo nakwintloko yolu hlobo. Ukunyaniseka kwesandi kukhubazeke kancinci xa sisebenzisa iindlela zokurhoxisa okusebenzayo, into ewela nakwiiparameter eziqhelekileyo.
Sidibana nabavukeli baseFresh'n Imveliso ejikelezileyo, amandla ayo abonakala ngaphezu kwababuthathaka, ngakumbi kuba amava odibaniso, ukulungiswa kunye nokuthuthuzela kuyahambelana nomgangatho wokumamela, othi nangona singekho kuluhlu lweprimiyamu, unikezela umgangatho ophakamileyo ngokwaneleyo kubo abasebenzisi wanelisekile. Ixabiso lokwazisa zii-euro ezingama-199,99 kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso ezinje ngeAmazon, iEl Corte Inglés kunye neFnac.
Utshintsho lokugqibela: 9 Juni ka 2021
Izinto ezicingwe kakuhle kunye noyilo
Ukubakho kokuhlengahlengisa iaudio ngeapp
Unxibelelwano olulungileyo kunye namava okusebenza
Imo yokuLungisa inokuphuculwa
Banokunika imvakalelo yokuqina okuncinci ngenxa yokukhanya
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Clam Elite, enye indlela ene-ANC ngoncedo lwe-Fresh'n Rebel